စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ - အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ် - 50% £မှ 50 အထိယှဉ်ပြိုင်ကစား |
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ် - 50% £မှ 50 အထိယှဉ်ပြိုင်ကစား
အဆိုပါ Boost အသားတင်အမြတ်အညီချီးမြှင့်ကြလိမ့်မည် (စစ်မှန်သောပိုက်ဆံအနိုင်ရရှိ) ရှေးခယျြထား slot နှစ်ခုအပေါ်. ကြောင်းကိုသင်၏ပိုက်ကွန်ကို P ကို​​ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်&L ကိုအနိုင်ရရှိအတွက်£ 10 နိမ့်ဆုံးရရှိခဲ့သည်, သငျသညျမှာတွက်ချက်တစ်ဦးထပ်တိုးဦးမည် 50% သင့်ရဲ့အသားတင် P ကို၏&L ကို.
အဝင်းက Boost များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်, ကစားသမားမြှင့်တင်ရေး၏နေ့၌£ 10 နိမ့်ဆုံးသိုက် လုပ်. က Superman အပေါ် wagered ရ, အဆိုပါ Batman, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်နှင့် The Green Lantern.
ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ slot ကဂိမ်းပေါ်မှာကစားရန်သာအသုံးပွုနိုငျ.
ယေဘုယျ စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ apply.Management ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိစ္စများတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်.
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – 50% Win Boost New game…